Indawo yokuhlala enendawo enkulu eluhlaza yabantwana kunye nezinja - I-Airbnb
Indawo yokuhlala enendawo enkulu eluhlaza yabantwana kunye nezinja
Indawo ezolileyo kwisithili esihle saseFrohnau. Ingca enkulu (malunga neehektare ezi-2) yokuzulazula nenja yakho nabantwana okanye uzipholele nje. Iikati, imivundla kunye neenkukhu zihlalisana efama. Kwabancinci kukho indawo yokudlala eyahlukileyo kunye ne-trampoline, isilayidi kunye ne-swing kwipropati. Imbonakalo yePanoramic kuyo yonke i-Annaberg-Buchholz.
Igumbi lokulala elizolileyo elinebhedi ephindwe kabini kunye neTV kunye nelinye igumbi lokulala elineebhedi ezilalayo zomntu wesithathu nowesine. Kugqitywe ifulethi leholide kwifama yangaphambili enesango layo lokungena. Ikhitshi elibanzi-cum-igumbi lokuhlala elinekhitshi elinezixhobo zangoku kunye neendawo zokuhlala ezitofotofo. Igumbi lokuhlambela elineshawa. I-WiFi iyafumaneka. Ngexesha lasebusika elipholileyo, ungazivumela ukuba uthotywe ngokufudumeza ngaphantsi.
Ukuba ufuna ukuva inkcubeko yase-Erzgebirge kufutshane, uya kufumana iSt Annen Church, iFrohnauer Hammer, iEduard-von-Winterstein-Theater, iFichtelberg, iivenkile ezininzi, iicafe nokunye okuninzi kwindawo ekufutshane!
Ngexesha lokuhlala kwakho, ndiyafumaneka ukuba ndiphendule imibuzo kunye nezimvo zakho, zombini ngefowuni nangomntu. Musa ukoyika ukuthetha nam!